Ronaldo oo afar Hotel kuwa nooca raaxada ah ka furaya Jasiiradda Ibiza – Gool FM
Ronaldo oo afar Hotel kuwa nooca raaxada ah ka furaya Jasiiradda Ibiza
Kaafi February 6, 2017
(Madrid) 06 Feb 2017. Xagaagii hore Cristiano Ronaldo waxa uu dhawr maalmood oo ka mida fasixiisi ku qaatay jasiiradda Ibiza waxa uuna go’aan ku gaaray in uu meel mariyo baahinta Hotel-ladiisa raaxada ee loo yaqaan (Pestana CR7 Lifestyle Hotels) oo uu afar Hotel meeshaas ka furo.
Ronaldo waxa uu shirko la noqday ganacsatada Hotel-lada raaxada dhisa ee loo yaqaan Pestana Hotel Group gabagabadii 2015.
Kooxdaas waxa ay xaqiijisay in ay heshiis la gaareen shirkadaha kale ee ay isku jaalka yihiin sida JLL Hotels iyo Hospitality Group (JLL) si ay ganacsigooda u gaarsiyaan Jasiiradda ku taal badda Balearic.
Pestana waxa ay xulan doonaan Hotel-lo gaar loo leeyahay ama kuwo dhisme ku socdaan si ay ugu daraan naqshadda CR7.
“Meelaha ugu xiisaha badan waa magaalada Ibiza, Santa Eualia del Rio iyo Playa d’en Bossa,” ayey warbixin ku sheegtay shirkadda.
“Ibiza waa jiho dabiici u ah Pestana CR7 Lifestyle Hotels waxaana ka go’an in ay goobaha dalxiiska ugu wacan gasho,” sidaas waxaa yiri ku xigeenka madaxa fulinta JLL kaas oo masuul a aha Spain iyo Portugal, Luis Arsuaga Rato.
Ronaldo horey waxa uu Hotelo-ceynkaas ah uga hirgaliyey Mareykanka iyo Portugal gaar ahaan Jasiiradda uu ka soo jeedo ee Madeira.
Waa kuwee kooxaha Premier League ee dhaliyay Saddexleyda ugu badan (hat-tricks)??
Kooxda ugu xun Premier Leageu oo la soo saaray...(Yaa kaga jira naadigaad taageerto??)